Abapapashi bezakwalizwi basebenza kunye ukukhulisa ubuchule ngexesha lobhubhani we-COVID-19 -AfriArXiv
E papashwe ngu NguJorem on 27I Epreli 2020 27I Epreli 2020
Namhlanje nge-27 ka-Epreli ngo-2020, iqela labapapashi kunye nemibutho yezonxibelelwano yabaphengululi ibhengeze inyathelo lokudibana ukwandisa ukusebenza kakuhle koqwalaselo lweontanga, ukuqinisekisa ukuba umsebenzi ophambili onxulumene ne-COVID-19 uyaphononongwa kwaye upapashwe ngokukhawuleza nangokusekuhleni njengoko kunokwenzeka. I-AfricArXiv ixhasa ngokupheleleyo le ndlela yokusebenzisana. Nceda ufumane ngezantsi le leta evulekileyo yenjongo.
[yapapashwa kwasekuqaleni oaspa.org/covid-19-pubhlolis-open-letter-of-intent-rapid-review/]
Ubhubhane we-COVID-19 udale imeko ekhawulezileyo yokuvula nokwabelana ngokukhawuleza kunye nokuphononongwa kophando lwe-COVID-19.
Thina, iqela labapapashi kunye nemibutho yezonxibelelwano, sizibophelele ekusebenzeni umshicileli ngokukhawuleza wokujonga ngokutsha kunye nokujonga inyathelo lokutshintshela. Ngokuqinisekiswa koMbutho wabaPapashi boFikelelo oluVulekileyo (i-OASPA) senza ezi fowuni zilandelayo kubahlaziyi, abahleli, ababhali, kunye nabapapashi kwindawo yophando, ukuze kwandiswe ukusebenza kakuhle kunye nesantya soxilongo kunye nenkqubo yokuhlaziywa kontanga ye-COVID. -19Phando.
Abavavanyi kunye nababhali:
Simema abavavanyi bokuvolontiya abanobuchule abafanelekileyo kwi-COVID-19 kuwo onke amabakala omsebenzi kunye noqeqesho, kubandakanya abo basuka kumzi-mveliso, ukuba babhalise “kwi-pool ehlaziyayo ngokukhawuleza” kwaye bazibophelele kumaxesha okuphononongwa ngokukhawuleza, kunye nesivumelwano sangaphambili sokuba uphononongo lwabo Isazisi singabelana phakathi kwabapapashi kunye neejenali ukuba ukuhambisa kungenisiwe kwakhona. Nceda ubhalise kule imo.
Simema abavavanyi bokuvolontiya (nokuba babhalisile okanye akunjalo ukuba babhalisele uphononongo olukhawulezileyo) ukuchonga nokubeka ukubaluleka nokubaluleka kwe-COVID-19 (umzekelo: kusetyenziswa https://outbreaksci.prereview.org/), kwakamsinya, ukwandisa ixesha elincinci labahlaziyi abaziingcali abaye bamenywa kamva ukuba baphonononge olona lubalulekileyo kunye noluthembisayo lophando lwejenali / iqonga.
Simema ababhali ukuba baxhase abavavanyi kunye nabapapashi kule nzame ngokuqinisekisa ukubekwa kokungeniswa kwabo njengobungqina bokuqala, nangokusebenza nabapapashi ukwenza inqaku elihlaziyiweyo labalingane kunye nedatha ehambelana nayo, isoftware, kunye nemodeli ziyafumaneka ngokukhawuleza ngokukhawuleza .
Simema bonke abapapashi ukuba basebenze ngokukuko kwiposi yokuqala ye-COVID-19 ukwenza i-server yokuqala ngesivumelwano sababhali, ukuba ababhali abakalithumeli ilungelo lokuqala. Oku kufanele ukuba kube semva kokuqinisekisa ukungeniswa kwemvume yokungenisa. (Iyaqondwa iiseva zamalungelo okushicilela nazo zizenzela ezazo iitshekhi kunye novavanyo.) Iiseva zaphambi kokumamela zibandakanya, kodwa azinqingwanga bioRxiv, medRxiv, arXiv, Iiprinta ze-OSF, Iiprinta zeSciELO njl, kuxhomekeke kubume bophando.
Simema bonke abapapashi nabahleli ukuba baqwalasele izimvo zabo kwimbonakalo yenkqubo yokuphononongwa koontanga.
Simema bonke abapapashi ukuba baqinisekise ukuba onke amangeniso e-COVID-19 abandakanya ingxelo yesinyanzelo yokufumaneka kwedatha, ukuba abanakwenzi konke konke lokhu kungenisa.
Abapapashi mabajolise ekwenzeni lula ubugosa Idatha ye-FAIR kunye nekhowudi yesoftware ekwabelwana ngayo ngokubaluleka kwamaphepha e-COVID-19 (kunye nezinto eziphambili ezinxulumene noko) ngexesha lo bhubhani ngokusebenza kunye Ukwabelana, I-Alliance yeDatha yoPhando kunye neQonga11 ngokudibanisa I-RDA / Force11 Iqela eliSebenzayo eliSebenzayo (umz. ukubonelela ngeengcebiso kwiindawo ezixhonyiweyo kunye nokusetyenziswa kwedatha efanelekileyo kunye nemilinganiselo yemethadatha).
Lo mnxeba ukongeza ekuxhaseni le minxeba ilungelelaniswe ne-Wellcome Trust:Ukwabelana ngedatha yophando kunye neziphumo ezihambelana nenqaku le-coronavirus (COVID-19)"Kwaye"Abapapashi benza umxholo we-coronavirus (COVID-19) ifumaneka ngokukhululekileyo kwaye iphinde isetyenziswe kwakhona".
I-eLife, i-F1000 yoPhando, i-Hindawi, i-PeerJ, i-PLOS, iRoyal Society, i-FAIRsharing, i-Outfallak Science Rapid PREreview
Khuphela njenge PDF
Ukufumana ulwazi oluthe kratya kwiqela kunye / okanye ukubandakanyeka nceda tsalela:
USara Gre Gre (sarah.greave@hindawi.com) okanye uPhil Hurst (phil.hurst@royalsociety.org) kwimibuzo malunga neqela okanye inyathelo lokuqala.
UClaire Redhead (claire.redhead@oaspa.org) ye-OASPA kunye nemibuzo ngokubanzi.
iindidi:	UkusebenzisanaCovid-19UkuFikelelaXa uPublishing
tags: Jonga kwakhonauphononongo olukhawulezileyo
ut ut id, mi, ante. elit. ukunyuka. Phasellus